Leaveareply	1) ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် မကြာမီ ဆောက်လုပ်သွားမည့် ဧရာဝဏ်နှင့် ရတနာအိမ်ရာစီမံကိန်းနှစ်ခုအတွင်း နှစ် ၆၀ မြေဂရန် ပိုင်ဆိုင်ထားသူများ ရှိနေပြီး အဆိုပါ မြေပိုင်ရှင်များမှ ပေါင်နှံခွင့်၊ ရောင်းချခွင့်၊ ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိလိုကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ အိမ်ရာစီမံကိန်း မြေနေရာအား ၁၉၉၁ ခုနှစ်က မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ မြေဧက ၂၂၀ ခန့်အပေါ်တွင် မြေကွက်ပေါင်း ၄၄၀၀ ရောင်းချပေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က တိုက်ခန်းတစ်ခန်း ကျပ်သုံးသိန်းဝန်းကျင်သာရှိစဉ် အဆိုပါ မြေကွက်တစ်ကွက်အတွက် ကျပ်နှစ်သိန်းနှင့် ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ စသည့် မြေအနေအထားအလိုက် ပေးချေခဲ့ရကြောင်း မြေကွက်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမင်းတလဥာဏ်က ပြောသည်။
2) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း Coca-Cola စက်ရုံတည်ထောင်ခွင့်အား MIC မှ ချထားပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် MIC ၏ (၃၉/၂၀၁၂) ကြိမ်မာက် အစည်းအဝေးမှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd အမည်ဖြင့် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရေသန့်ကိုပါ ထုတ်လုပ်ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
3) အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရတ်အိုဘားမား မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Institute Of International Education(IIE) မှ တက္ကသိုလ်ကိုးခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရတက္ကသိုလ်များ ပူးပေါင်းကာ အဆင့်မြင့် ပညာရေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် Academic ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် International Academic Partnership Program(IAPP) အစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်အရ မြန်မာနှင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်များ အဆင့်မြင့် ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ပညာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်များဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Read More ===>http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17154:2013-01-04-07-07-23&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112
4) “ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ကို Android ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်”
လက်ရှိနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ကို Android ဖုန်းများတွင် အလွယ်တကူ အသုံးပြုဖတ်ရှုနိုင်ရန် မြန်မာအင်တာနက်လုပ်ငန်းမှ Andriod mobile app(beta version)ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီဟု သိရသည်။
5) မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြား လေကြောင်းလိုင်းများကို အကန့်အသတ်မဲ့ ပျံသန်းခွင့် ပြုတော့မည်ဟု ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။.
6) မြစ်ဆုံရေကာတာ ဆက်လုပ်ရေး တွန်းအားမပေးရန် တောင်းဆို ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြစ်ဆုံရေကာတာဆက်လုပ်ရေး တွန်းအားမပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများကွန်ရက်က တရုတ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
7) လာမယ့်လွှတ်တော်အတွင်း ခေတ်စနစ်နဲ့ မညီတဲ့ ဥပဒေတွေ ပြင်ဖို့၊ ဖျက်ဖို့၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လွှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
အခုလအတွင်း ပြန်လည်ကျင်းပမယ့် လွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့ အခြားအရေးကြီး ဥပေဒတွေ ပြဋ္ဌာန်းဖို့ ရှိတာကြောင့် အရင်လွှတ်တော်တွေထက် အချိန်ပိုယူရမယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
This entry was posted in ကမ္ဘာ့သတင်း, မြန်မာသတင်း, News and tagged ပြည်သူ့လွှတ်တော်, မြန်မာ, မြန်မာသတင်း, မြန်မာသတင်းများ, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, Myanmar Latest News, Myanmar President, Myanmar Update News, news, Obama Myanmar on January 5, 2013 by koshwehtoo.	Post navigation
Diary ofasoldier from Front row at Kachin State →